Shirkada o Dp World e Maamusha Dekada Berbera o ka Hdashay Wiishkii ka Gubtay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Shirkada o Dp World e Maamusha Dekada Berbera o ka Hdashay Wiishkii...
Shirkada o Dp World e Maamusha Dekada Berbera o ka Hdashay Wiishkii ka Gubtay
06 September 2019: Shirkadda DP World Berbera ayaa xaqiijisay in shil ka dhacay wiish ay leedahay Shirkadda DP World Berbera abaaro 04: 39 daqiiqo maalintii khamiista ee ay bishu ahayd 05 September.
Wiishka Dekadda ee allaabada qaada ayuu dab qabsaday. Kooxaha gurmadka degdega ah ee Shirkadda DP World iyo laba ijiinada dabka lagula tacaalo ah ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay shilkaas kuna guulaystay in ay bakhtiiyaan dabka.
Ma jiraan wax dhaawac ama dhimasho ah, ama waxyeelo soo gaadhay baddeecaddaha oo ku dhalatay dhacdadan.
Wiishka dabku saameeyay iyo aaga dabku soo gaadhayba waa la xakameeyay waxana laga dhigay goob amaan ah oo dhammaan shaqaaluhu ka hawl gali karaan. Arrintani shaqadii Shirkadda DP World wax saamayn ah kumay yeelan sidii caadiga ahayd ayayna shaqadu u socotaa.
Amaanka shaqaalaha iyo qandaraasleyaashu waa ahmiyadda dhammaan adeegyada Shirkadda DP World. Sidaa daraadeed, DP World waxa ay bilawday baadhitaan lagu ogaanayo sababta dabka iyada oo kaashanaysa hay’addaha dalka ee ay khusayso waxayna qaadi doontaa talaabooyinka ku haboon ee lagaga hortagayo in arrintani dib u dhacdo.
Shirkadda DP World waxa ay u mahadnaqaysaa Maamulka Berbera taageerada ay siiyeen Kooxaha gurmadka degdega ah ee DP World iyo jawaabtii degdega ahayd ee lagu badbaadiyay laguna sugay dhammaan amaanka shaqaalaha iyo hantida.
Shirkadda DP World waa hormoodka saacida ganacsiga aduunka iyo qayb muhiim ah oo isku xidhka ganacsiga ah. Waxa aanu qabanaa shaqooyin badan oo isku xidhan- ka bilaabma badda iyo berriba ah, adeegyada badda, adeegyada daabulka/farsamo iyo caawineed gaadhsiisana ilaa xalka ganacsiga ee teknoolajiyaddu hagayso.
Waxa aanu ka hawlgalnaa in ka badan 150 goobood oo ku kala yaal in ka badan 45 waddan oo ku kala yaal lixda qaaradood, anaga oo ku leh suuqyo gaamuray iyo kuwo soo karaya labadaba. Ujeeddadayadu waa in aanu muhiim u noqono mustaqbalka ifaya ee ganacsiga aduunka iyada oo aanu xaqiijinayno in wax kasta oo aanu qabanaa si togan oo fiican u saameeyo dhaqaalaha iyo bulshada labadaba.
Shaqaalahayaga hawlkarka ah oo ka kooban in ka badan 46,000 kana kala socda 120 waddan waxa ay xidhiidh fiican la yeeshaan dawaladdaha, shirkaddaha maraakiibta, ganacsatda wax soo dajiya iyo kuwa wax dhoofiya, bulshada iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah dadyawga isku xidhka aduunka anaga oo adeegyo tayo leh siina maanta iyo berriba.
Maamulka koontiinaradu waa shaqada ugu weyn ee Shirkadda waxayna soo saartaa boqolkiiba konton (50%) dakhligeeda. 2018 kii Shirkadda DP World waxa ay maamushay 71.4 milyan TEU ( Cabiro u dhigma 20 Feet) xafiisyadayada oo dhan. Iyada oo ay jirto hormarka, isbalaadhinta iyo hawlkarnimadeeda, waddarta awoodeeda hadda oo ah 91 milyan TEU waxa la filayaa in ay la kordho dalabka suuqa.
Ku talogalka hore, saadaasha isbedelka iyo hal abuurnimadeeda awgeed, Shirkadda DP World ujeedadeedu waxa weyaan in ay abuurto xalalka (solutions) ganacsi ee ugu amaansan, ugu waxtarsan ee ugu wax soo saarka badan aduunka.
Previous articleHogaamiyihii ugu Awooda Badnaa Maafiyadda Dalka Talyaaniga Ayaa Diinta Islaamka qaatay.
Next articleDaawo Odayaal dhaqmeed iyo Ex wasiiro hore o ka hadlay sami qaybsiga dawladnimada somaliland